Tun Tun's Photo Diary: June 2014
ကန္ဒမာပန်း စိုက်ခင်း ကို သွားပြီးတော့ Cactus Point ဆိုတဲ့ Cactus ပန်း အပါအ၀င် တခြား ပန်းတွေပါစိုက်ထားတဲ့ ခြံကို လိုက်ပို.ပါတယ်။ အပင်တွေကို သဘောကျ၇င် တခါတည်းဝယ်သွားလို.၇ပါတယ်။ မုန်.၊ လက်ဆောင် ပစ္စည်း၊ ပန်းစိုက် ပစ္စည်း (ပန်းအိုး၊ မြေသြဇာ စသဖြင့်) အစုံေ၇ာင်းပါတယ်။ Cactus အပင်ပေါက်လေးတွေ ကို ၀ယ်ချင်တာ သယ်၇မှာ အလုပ်၇ူပ်လို. မ၀ယ်ခဲ့၇ဘူး။
After visiting to Chrysanthemum Farm, our tour bus dropped us at Cactus Point. There are so many types of Cactus and other flowers in this farm. By the way, it is not justafarm. It also sells cactus trees, snacks and tools for gardening. According to our guide, cactus trees from Cameron Highland are disturbed across Asia.
at 6/26/2014 06:06:00 PM2comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ. 21-Jun-2014 က Orchard Central မှာလုပ်တဲ့ fashion show ကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲက ခဏလေးပါ။ Model လဲ နည်းနည်းလေးပဲ ပါတယ်။ ကြည့်တဲ့သူ အ၇မ်းကြီးမများလို. ဓါတ်ပုံ၇ိုက်၇တာ အင်မတန် အဆင်ပြေပါတယ်။ အဆင်မပြေတာက Model တွေ ဆိုးထားတဲ့ နူတ်ခမ်းနီအေ၇ာင်ပါတယ်။ အေ၇ာင်အလွန် လိမ္မော် နဲ. အနီ ကြီးတွေ ဆိုးထားတာ ဓါတ်ပုံထဲမှာ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ တမျိုးကြီးပဲ။ ရွေငါး နူတ်ခမ်းကြီးတွေ နဲ. သွားပြီးတူနေတယ် ထင်တယ်။ :)
On 21-Jun-2014, Saturday, I went to shoot the fashion show at Orchard Central. The show only hadafew model and show time was also very short. Thus, there were not so many people at the show so it was quite convenience to shoot the models. Please enjoy the photos and leave some comment for me. :P
at 6/23/2014 12:09:00 AM3comments:
Labels: Fashion Show, Model, Singapore
Cameron Highland, Malaysia #5 (Chrysanthemum Farm & Watercress Valley)
Colorful Chrysanthemum Farm
Strawberry and Vegetable Farm ပြီးတော့ Chrysanthemum Farm ကိုေ၇ာက်သွားပါတယ်။ မြန်မာလို ခေါ်၇င် ကန္ဒမာပန်းလိုခေါ်ရမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က ကန္ဒာမာ ပန်းက အပွင့် ပိုကြီးတယ်။ အမျိုးနည်းနည်းကွဲသွားလို.ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းပွင့်ပုံစံကတော့ တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။ ပန်းတွေ ပွင့်နေတာ အများဆိုမှ အများကြီးပဲ။ ပြီးတော့ အေ၇ာင်စုံ စိုက်ထားတာ။
This is the second destination of our Second half-day tour after visiting Strawberry and Vegetable Farm. There are uncountable Chrysanthemum flowers blossom all over the farm.
It is so beautiful and I don't want to leave that place.
at 6/07/2014 07:56:00 PM 1 comment:
Labels: Cameron Highland, Flower, Landscape, Malaysia
at 6/04/2014 07:25:00 AM2comments: